Teknoolajiyada lagu abuurayo kursi baayac oo siiya gacmahooda
Furo kursi kasta ayaa loo tixgeliyaa qurxinta. Milkiile kasta oo ka mid ah goobaha dalka ayaa had iyo jeer heli doona meel loogu talagalay nooca noocaas ah, oo ah hoy, dhismo, guri guri, ama dhismo leh beer iyo beer. Dabcan, hadda wax badan oo ka mid ah alaabooyinkaas oo kale ah waa suuqa, laakiin marwalba way wanaagsan tahay inaad noloshaada u qalanto.
Talo-siinta qoob-ka-shaqeeyayaasha ee qajaarka sii kordhaya ee lagu koriyo
Helitaanka dalagga qani ku ah qajaarka ee berriga furan ee cimiladeenna aan la saadaalin Karin waa hawl aan ku haboonayn. Sidaa daraadeed, beeralayda khudradda badan iyo kuwo ka badan ayaa dooranaya iyaga oo dooranaya qajaarka sii kordhaya ee lagu koriyo. Si kastaba ha noqotee, xitaa habkan, waxaa habboon in la barto sharciyada aasaasiga ah iyo barashada qarsoodiga ah helitaanka tirada ugu badan ee miraha xilliga xagaaga.
Barafyada yaryar ee loogu talagalay cariishyada xagaaga - beeraha yaryar ee loo yaqaan "polycarbonate" oo la qaadi karo
Marka la qorsheynayo dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo ee goobta, waa lagama maarmaan in si cad loo muujiyo ma aha muuqaalka muuqaalkiisa, laakiin sidoo kale waxqabadka, si loo doorto midka ugu wanaagsan ee kala duwan ee fursadaha naqshadeynta. Noocyada caanka ah ee lagu koriyo Goobaha iyo beeraha, saddex nooc oo lagu koriyo oo ku yaala goobta ayaa ah kuwa ugu guulaha badan: Dacha la qaadi karo Laga soo bilaabo jacaylka caanka ah, aqalka dhirta lagu qaadi karo wuxuu u fiican yahay fududkiisa iyo roonaanta.
Tiknoolajiyada dhismaha xarig ka samaysan polycarbonate iyaga oo gacmahooda u leh
Goobtu waa nooc qaabdhismida saqafka ah oo loogu talagalay inay ka ilaaliso dhammaan noocyada roobabka. Markii hore, dhismayaashaas ayaa lagu dhisay tuulooyinka. Wax yar ka dib, xirmooyinka ayaa bilaabay in lagu dhiso hoy ka soo socda roobka ku yaal xaafadaha iyo suuqyada. Generation ka dib qarnigii qarnigii qarniga ka dib, waxay keentay xaqiiqda ah in noocyada canopies ay noqdeen kuwo aan caadi ahayn.
Beddelka weyn ee aqalka dhirta lagu koriyo: qashinka-yar-yar
Magaca laftiisu wuxuu ka hadlaa qiyaasta yar ee qaabkan. Inkasta oo farqiga u dhexeeya qiyaasta aqalka dhirta lagu rakibay, caruurtaasi waxay si nadiif ah u ilaalinayaan dhirta waxyeelada xun ee deegaanka. Mini-aqalka dhirta lagu koriyo waxaa loo tixgeliyaa naqshad yar. Goobaha noocan oo kale ah ayaa caan ku noqday sababtoo ah sahlanaanta rakibidda, sahlan, iyo qiimaha la awoodi karo.
Goosashada qudaarta ee aqalka dhirta lagu koriyo "Kabachok" polycarbonate
Greenhouse oo loo yaqaan "Zucchini" waxaa loo isticmaalaa dhirta yar yar. Kuwaas waxaa ka mid ah basasha, yaanyada, zucchini iyo kuwo kale oo badan. Qalabka noocan oo kale ah waa sahlan tahay in la isku geeyo, xitaa uma baahnid qalab dheeraad ah ee rakibidda. Tilmaamo farsamo Salka qaab-dhismeedka waa biraha biraha. Miisaankiisu waa 25x25 mm.
Si sahlan oo loo sahlan yahay in lagu soo ururiyo aqalka dhirta lagu koriyo "Cabriolet"
Bannaanka ganacsiyada ah ee laga heli karo aqallada lagu koriyo badanaa waxay raaxaystaan ​​mulkiilayaasha leh dhibaatada isticmaalka, awoodda hoose ee walxaha aan u adkeysan karin heerkulka jiilaalka iyo barafka. Intaa waxaa dheer, mar walba laguma talin karo in lagu xakameeyo dhulka dhulka leh aqalka dhirta lagu koriyo. Mararka qaar waa sahlan tahay in lagu sameeyo aqalka dhirta lagu koriyo, kaas oo ku haboon sariirta ama qajaarka.
Guri fudud oo loogu talagalay geedo - Fazenda aqalka dhirta lagu koriyo
Waxaan masuul ka nahay kuwa soo xareeyey. Xitaa haddii ay tahay duurka qajaar ee waddanka, weli waa lagama maarmaan in la siiyo deegaan raaxo leh oo ammaan ah. Maalmahan waxaa jira qalab shaqeyn kara sida ugu macquulsan. Si kor loogu qaado dhalidda qorshaha, iyada oo aan sameynin dadaal bani'aadanimo ah, aqalka dhirta "Fazenda" ayaa caawin doona.
Guryo-cagaaran oo shaqeynaya "Breadbox"
Greenhouse wuxuu siiyay naqshad magac aan caadi ahayn ah. Waxay u egtahay roodhi gurigaaga caadiga ah. Isbarbardhig, ku habboon shaqada iyo dhismaha heesaha ayaa ku habboon cagaarka iyo ubaxa xagaaga xagaaga. Qeexida tusaalaha Noocyada aqalka dhirta lagu koriyo ayaa leh qiyaas yar, laakiin goobta shaqada ayaa loo isticmaali karaa 100%.
Iskuulada yaryar ee yaryar waa kuwo si wacan u bedelaya koriyo qaali ah oo qaali ah, taas oo mararka qaarkood ay adag tahay in la helo meel ku haboon meelaha yaryar ee magaalooyinka. Guryaha yar yar waa sahlan tahay in la rakibo, mobile, waxay leeyihiin kharash yar. Thanks to tayadaas, waxay sii kordhayaan caan u ah beerta.
"Greendrop" oo ka soo jeeda Baagagroplast si ay u siiso agrofibre
Maanta cimilada dabiiciga ah, waxaa suurtagal ah in lagu guulaysto noocyo kala duwan oo ah khudradda iyo berry. Guusha Tani waxay ku salaysan tahay waxyaabo badan oo ka mid ah waxyaabahan soo socda. Oo ha la qabsado noocyada beeraha sida aqalka dhirta lagu koriyo iyo aqalka dhirta lagu koriyo ayaa u muuqda mid aad u fudud, iyaga oo aan si dhib yar u suura galin inay maanta kobciyaan qajaarka iyo yaanyada xilliga jiilaalka.
Hotbed "Akhriso" - qaababka naqshadeynta ee lagu koriyo oo laga bilaabo agrospan
Greenhouse "Accordion" wuxuu ka kooban yahay baaldiyo caag ah iyo muraayad daboolan, oo ku xiran qaabka mudada dheer ee dhererka. Naqshaduhu waa mid khafiif ah, wuxuu leeyahay nalfac wanaagsan oo wanaagsan, si taxadar leh ayuu u ilaaliyaa beerto laga soo bilaabo baraf, dabayl, roobab culus. Sida daboolida alaabada loo adeegsado "Agrospan 60", "SUF-42" ama "BlueSvet 60".
Isgoysyada diyaarka ah oo lagu kalsoon yahay "Beautiful Dacha": sharaxaad iyo sawir
Beeralayda casriga ah meel kasta oo ay ku yaalaan waxay ku habeeyaan beeraha xagaaga ee lagu koriyo oo ay ku beeraan khudaarta. Qaababka noocan oo kale ah waxay ilaalinayaan geedo, iyo ka dib dhirta qaangaarka ah, laga bilaabo qabow, iyaga oo siinaya microclimate raaxo leh xitaa meelaha ugu caansan ee beerahooda.
Hotbed "Cucumber": loogu talagalay kuwa ku qanacsan isdhexgalka iyo fanka heesaha
Waa qarsoodi in, isku dayaya in ay abaabulaan aqalka dhirta lagu koriyo ee goobta, bannaanka ayaa isku dayaya in ay abaabulaan meel sida ugu wanaagsan ee suurtagal ah isla markaana isla markaa badbaadin. In beerta yar yar, aqalka dhirta lagu koriyo qajaar ah ayaa si fiican ugu habboon deegaanka. Dhismahan yar-yar wuxuu leeyahay bedel sahlan oo wuxuu ku habboon yahay geedo sii kordhaya.
Milkiilaha aad ku nooshahay 6 hektar ama dhul adag, halkaasoo aad qorshaynayso inaad qabanqaabiso ganacsigaaga koritaanka iyo iibinta alaabada beeraha, su'aasha ah doorashada hababka koritaanka iyo geedo, iyo khudaarta hore ayaa kici doona. Beeraha dhirta kala duwan ee beerta furan, gaar ahaan aagga beeraha halista ah, waa mid aan la saadaalin Karin.
Magaca ayaa si buuxda u caddaynaya - aqalka dhirta lagu koriyo "Goobo wanaagsan", oo lagu sameeyey gacmahaaga
Xaaladaha metro-casriga casriga ah, qofku wuxuu leeyahay rabitaan dabiici ah oo dabiici ah - inuu booqdo hawada cusub marar badanna cun cunno caafimaad leh iyo mid caafimaad leh. Sababtan awgeed, dad badan ayaa doorbidaya inay xilliga xagaaga ku qaataan dalka, koraan khudaarta cagaaran iyo miraha. Xaaladdan oo kale, beeraleydu waxay inta badan is weydiiyaan su'aasha: sida loo ilaaliyo miraha iyo isla markaa lagu badbaadiyo aqalka dhirta qaaliga ah?
Noocyada abuurista aqalka dhirta laga sameeyo polycarbonate ayaa sameeya: sameynta sawir, sawirro sawir leh
Bannaanka iyo beeralayda badan oo waqti dheer isticmaalaya koriyo, oo ay ku jiraan polycarbonate. Maanta waa suurtagal in la soo iibsado naqshado diyaar ah, laakiin qiimaha ay aad u sarayso, marmarka qaarkoodna maaha mid ku habboon xaalad gaar ah oo macaamiil gaar ah. Maaha wax la yaab leh in tiro badan oo dad ah ay abuuraan kuwo lagu koriyo oo gacmahooda iska leh.
Makhaayad muddo dheer ah oo lagu koriyo "Shillin"
Iyadoo qaboobaha jilicsan iyo xagaaga gaaban, waa ku adag tahay inuu bannaanka si ay u sameeyaan iyada oo aan lagu koriyo. Kaliya caawimada kuwa ugu dambeeya waxaa jira fursad ay ku koraan dalagyada wanaagsan. Guryaha dhirta oo buuxa waa qaali, waxay qaadataa meelo badan, iyo sidoo kale ma laha dhaqdhaqaaqa, taas oo ay hadda si firfircoon u beddesho lagu koriyo oo ah qiyaaso iyo qaabab kala duwan.
In muuqaalka, aqalka dhirta lagu koriyo "Butterfly" waxay runtii u egtahay balastar leh baalal furan. Marka la xiro, waxay aad u egtahay cocoon, gudaha taas oo heerkulka la rabo iyo microclimate loo hayo. Tani waa dhismo ku habboon, kaas oo la dhiso wakhti gaaban, oo aad si dhaqso ah u demin kartid iyo dadaal gaar ah.